ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကျောက်စရစ်ခဲလေးတွေနဲ့ ခြံဝင်းလေးထဲအလှ ပြင်ဆင်ဖန်တီးကြရအောင်….
တကယ်တော့ နေအိမ်အလှပြင်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းက သိပ်ပြီးတော့ လည်းခက်ခက်ခဲခဲ မလုပ်ရတဲ့အပြင် အိမ်အလှဆင်မယ့်အလှဆင် ပစ္စည်းလေးတွေကလည်း ခက်ခက်ခဲခဲနဲ့ ဈေးကြီးကြီးပေးဝယ်မှ ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကူးကလေးတွေ၊ မိမိမှာရှိနေ တဲ့...
ခြံဝင်းလေးထဲက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပန်းပင်လေးတွေ၊ အပင်လေးတွေ စိုက်ပျိုးတတ်ဖို့
သင်တို့မိသားစုအတွက် လုံခြုံပြီး ချစ်စရာကောင်းခမ်းနားတဲ့ နေအိမ် တစ်လုံးအပြင် သင်တို့အိမ်မှာ ခြံဝင်းကျယ်ကျယ်လေးရှိခဲ့မယ် ဆို ရင်တော့ နေအိမ်ကလေးအတွက် အပြင်အဆင် အလှဖန်တီးခြင်း တွေကို ခြံဝင်းလေးမှာလည်း ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခြံဝင်းအပြင်အ ဆင်လေး...
သင့်အိမ်တွင်းမှာပဲ ပျော်ရွှင်စရာ ဆော့ကစားစီးလို့ရမယ့် လျှောစီး ကလေးတွေ တည်ဆောက်ကြမယ်….
သင်က စိတ်ကူးကောင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်လား၊ ဒါမှမဟုတ် ဆန်းကြယ်မှုနဲ့ စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို ခံစားရတာ ကြိုက်တဲ့လူ တစ်ယောက်လား။ သင့်ရဲ့နေအိမ်မှာ ဘယ်မှာမှ မမြင်ဖူးသေးတဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်းတွေ ပြင်ဆင်ဖန်တီးဖို့အတွက် စိတ်ကူးဖူးလား။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အခုဖော် ပြမယ့်...
မလိုအပ်တော့တဲ့ သစ်သားအပိုင်းအစလေးတွေနဲ့ နေအိမ်တွင်းအိမ် အလှဆင်မယ့်အသုံးအဆောင်ကလေးတွေ...
အိမ်တစ်အိမ်လုံးစာ ပြင်ဆင်တည်ဆောက်မှုအတွက် သစ်သားကုန် ကြမ်းတွေကို အသုံးပြုပြီးနောက်မှာ ကျန်ခဲ့တဲ့ သစ်သားအပိုင်းအစ၊ အသုံးမလိုတော့တဲ့ အပိုသစ်ချောင်း၊ သစ်ချပ်ပြားလေးတွေ ရှိနေခဲ့ မယ်ဆိုရင် မလွှင့်ပစ်လိုက်ပါနဲ့။ ဒီအပိုဖြစ်နေတဲ့ သစ်သားအပိုင်းအ...
သီတင်းကျွတ်မှာ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မီးလုံး၊ မီးပုံးကလေးတွေထွန်း ညှိဖို့အတွက်...
ကဲ သိပ်မကြာမီအချိန်မှာတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ ဝါတွင်းသုံးလ ဆိုတဲ့ မိုးဦး အချိန် ကာလကို ကျော်လွန်နိုင်ပြီးတော့ မြန်မာလူမျိုး တွေရဲ့ တကယ့်ကို ကြည်နူး စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် ရာအချိန်ရောက်ရှိ လာတာက သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်တိုင်ပွဲ တော်တွေပဲ ဖြစ်မှာပါ။...
ဝါးနဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်ကလေးတွေနဲ့ အသုံးအဆောင်လေးတွေ ပြုလုပ်ဖန်တီးကြမယ်…
ဝါးကုန်ကြမ်းတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် အပေါများဆုံးနဲ့ ဈေးအသက်သာဆုံး အိမ်ဆောက်ကုန်ကြမ်းပစ္စည်းဖြစ်လို့ ပေါပေါများများ အသုံးပြုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ နိုင်ငံရဲ့များစွာသော သစ်တောတွေမှာ ဆိုရင် ဝါးပင်တွေပေါများစွာပေါက်ရောက်နေတာကိုတွေ့ရတာမို့လို့...